Clairely Upcycled Jewellery Karazan-Firavaka - Famolavolana
Karazan-Firavaka Firavaka tsara tarehy, mazava sy malefaka, natao tamin'ny tsy tokony hampiasana ny fako avy amin'ny famokarana Claire de Lune Chandelier. Ity tsipika ity dia niforona tamin'ny fanangonana marobe - tantara rehetra, izay maneho ny fijerena tena manokana ao amin'ny foto-pisian'ny mpamorona. Ny fandanjalanjana dia ampahany manan-danja amin'ny filozofa ho an'ny mpamorona, ary izany dia hita taratra amin'ny alàlan'ny safidin'ny acrylic izay ampiasaina. Ankoatra ny fitaratra acrylic ampiasaina, izay maneho taratra mazava, ny lamba kosa dia mangarahara foana, loko na mazava. Ny fonosana CD dia manamafy ny foto-kevitra momba ny repurposing.
Anaran'ny tetikasa : Clairely Upcycled Jewellery , Anaran'ny mpamorona : Claire Requa, Anaran'ny mpanjifa : CLAIRELY upcycled jewellery.
Karazan-Firavaka Claire Requa Clairely Upcycled Jewellery